ထူးခြားခြင်းများစွာနှင့် (၄) ကြိမ်မြောက် အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်း – JQY's Blog
ယခုနှစ် ၁၃၇၂ – ခုနှစ်၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၁) ရက်၊ (24.10.2010) တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာသူငယ်ချင်းများနေ့ ဝက်ဆိုက်မှ ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေး ပူးတွဲ အလှူပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တွင် ဆည်းဆာရိပ် ဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများနှင့် အလှူငွေများ ပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး မန္တလေးတွင် ဘုရားရှင်၏ လမ်းညွန်ပြသခဲ့သော နည်းလမ်းများနဲ့အညီ ဆွေတော်မျိုးတော်အတွက် ကျေးဇူးဆပ် ရေစက်ချ အမျှပေးဝေခြင်း ကောင်းမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“မြန်မာတို့သည် အယုံလွယ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာတို့က ပိုအယုံလွယ်သည်။ အထင်ကြီးအောင် တစ်ခု နှစ်ခုလုပ်ပြလိုက်သည်နှင့် စုံလုံးကန်းကြသည်။ အမှန် ပြောသူကိုပင် ရန်လုပ်တတ်သည်။ ခုလည်းကြည့်။ သီတင်းကျွတ်သည်နှင့် “အကျွတ်အလွတ်ပွဲ” ကို အပြိုင်ကျင်းပသည်။ ထိုအယူအဆသည် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတို့ အယူအဆ မဟုတ်။ အခြား ဘာသာဝင်တို့၏ အယူအဆဖြစ်သည်။
သိပ်မဝေးသေးသော တစ်ခါက ဤသို့ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။ ဈေးချိုတော် အနောက်ဘက် မိုးကောင်းတိုက်၏ တိုက်မကြီးကို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးက ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဘာသာရေးအရ အယူသီးမှု ပြင်းထန်တတ်သော ဘာသာခြားက ဘုရား၏ ချစ်သားတော်များ နေထိုင်သီတင်းသုံးဖို့ ရာ ဧကဝက်ခန့်ရှိ လေးမျက်နှာ လှေကားပါ နှစ်ထပ်ကျောင်းကြီးကို လှူဒါန်းခဲ့သနည်း။ ထိုသူတွင် အလွန်ချစ်စရာကောင်းသော သမီးတစ်ယောက် ရှိသည်။ သမီးလေးက ချစ်လို့မှ မဝသေးခင် ဘဝတစ်ပါးသို့ ပြောင်းသွားခဲ့သည်။ ပြောင်းသွားခဲ့သည့် ဘဝကလည်း မကောင်း။ ပြိတ္တာဖြစ်နေသည်။ ပြိတ္တာလည်းဖြစ် ကုသိုလ်ကလည်းနည်းသဖြင့် အမျိုးမျိုးသော နှိပ်စက်မှုကို ခံနေရသည်။ ညည အိပ်ရာပေးပါ။ စားစရာပေးပါ၊ နေစရာပေးပါ၊ အဝတ်ပေးပါနှင့် ဖခင်ထံ လာလာငိုသည်။ ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးလေး အုဋ္ဌ်ဂူကို ကောင်းသထက်ကောင်းအောင် ပြင်သည်။ အစားအစာကို ညတိုင်းသွားချသည်။ အဝတ်အစားများချပေးသည်။ သို့သော် အိပ်မက်က ပေးမြဲ။
တစ်နေ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ဦးနဲ့ စကားပြောဖြစ်ရင်း ထိုအကြောင်းကို စပ်မိတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာက ဗုဒ္ဓနည်းကို ပြောပြသည်။ ထိုသူက မလုပ်ချင်သော်လည်း သမီးချစ်သည့်ဇောဖြင့် သံဃာတော်ကို ဆွမ်းကပ်သည်။ သင်္ကန်းနှင့် လှူဖွယ်ကပ်သည်။ အမျှဝေသည်။ သမီး အမျှရအောင်ဟု လောကပါလနတ်ကိုပါ တိုင်တည်၍ သမီးလေးကို သာဓုခေါ်ပါရန် တောင်းပန်သည်။ ချက်ခြင်းပင် ထိုည၌ သမီးဖြစ်သူက ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်ရပြီဖြစ်ကြောင်း အိပ်မက်ပေးသည်။ ထိုနေ့မှ ထိုသူသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်း တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့ ဘာသာခြားက မိမိဘာသာထဲမှ ကောင်းသည်ကို ယူသွားချိန် မိမိဘာသာဝင်က အခြားဘာသာတို့၏ မကောင်းသော အချက်များကို ရှာဖွေယူနေသည်မှာ မကောင်းကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ လူငယ်များက ဗုဒ္ဓနည်းလမ်းကို နည်းမှန် လမ်းမှန် ပြုလုပ်၍ အများကို လမ်းညွန်ပြနိုင်သည်ကို ဝမ်းသာစွာ ကြိုဆိုပါကြောင်း အောင်တော်မူ နာယကဆရာတော်မှ သြဝါဒ မိန့်သည်ကိုလည်း တပါတည်း တင်ပြရင်း အားလုံး မုဒိတာ ပွားနိုင်ရန် ရငွေ သုံးငွေ စာရင်းကို တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
၁။ ဖြူလေး ………………………………………. ၄၅၀၀၀
၂။ ခိုင်ခိုင်ဝင်း ……………………………………… ၅၀၀၀
၃။ စိုးဝင်းအောင် ………………………………….. ၈၀၀၀
၄။ အေးချမ်းဖြူ ……………………………………. ၈၀၀၀
၅။ ကိုကိ …………………………………………… ၈၀၀၀
၆။ ဘကြိုင် ………………………………………… ၈၀၀၀
၇။ သီဟ …………………………………………… ၈၀၀၀
၈။ ရှင်းသန့် ………………………………………. ၁၀၀၀၀
၉။ ဒေါ်ခမ်းရွှေ မိသားစု (သီပေါ) ………………… ၃၀၀၀၀
၁၀။ ဝေဝေဇင် ……………………………………… ၅၀၀၀
၁၁။ ခင်မျိုးအေး ……………………………………. ၁၀၀၀
၁၂။ ဇင်မာနွယ် ……………………………………… ၃၀၀၀
၁၃။ ခင်မျိုးထွေး …………………………… ………. ၁၀၀၀
၁၄။ ကျော်ဇေယျထွန်း ………………………………. ၁၀၀၀
၁၅။ ဇော်ဦး ………………………………………….. ၁၀၀၀
၁၆။ ဆုဆု ……………………………………………. ၂၀၀၀
၁၇။အေး/သက်ဆုမြတ်မော် …………………………. ၂၀၀၀
၁၈။ အေးမြတ်သူ …………………………………….. ၅၀၀၀
၁၉။ အေးနန္ဒာကျော် ………………………………….. ၅၀၀၀
၂၀ မျိုးမင်းဇော် ……………………………………….. ၅၀၀၀
၂၁။ ဘိက္ခုကုမုဒြာ …………………………………….. ၅၀၀၀
၂၂။ ရဲမြင့်ဌေး …………………………………………. ၃၀၀၀
၂၃။ အာကာဖြိုး ……………………………………….. ၁၀၀၀
၂၄။ ကျော်ဆွေဦး ……………………………………… ၅၀၀၀
၂၅။ ကျော်စွာသိန်း ……………………………………. ၃၀၀၀
၂၆။ ကိုနိုင် (တင့်နိုင်လင်း) ……………………………. ၁၀၀၀
၂၇။ ဝေလင်း ………………………………………….. ၃၀၀၀
၂၈။ မိုးကေခမ်း ……………………………………… ၁၅၀၀၀
၂၉။ ကိုကိုမောင် …………………………………….. ၁၅၀၀၀
၃၀။ စိုးသန်းဦး ………………………………………. ၁၀၀၀၀
၃၁။ သင်းသွယ့်သွယ့်အောင် (လရိပ်) ………………… ၅၀၀၀
၃၂။ မီးငယ်စန္ဒာ ……………………………………….. ၅၀၀၀
၃၃။ ဖြူဖြူလွင် …………………………………………. ၃၀၀၀
၃၄။ ထွန်းထွန်းနိုင် ……………………………………… ၃၀၀၀
၃၅။ မမခိုင် (ရန်ကုန်) …………………………………. ၁၀၀၀၀
၃၆။ အင်းတော်ရှမ်း …………………………………….. ၅၀၀၀
၃၇။ ဇော်ထွေး ………………………………………….. ၅၀၀၀
စုစုပေါင်း ရရှိငွေ…………………………………… ၂၅၈၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဆွမ်းကိစ္စအတွက် အောင်တော်မူဂေါပကထံအပ်ငွေ ………… ၆၀၀၀၀
၂။ အိုးသူကြီး ……………………………………………………….. ၅၀၀၀
၃။ သင်္ကန်း (၈၀၀၀x၅) …………………………………………… ၄၀၀၀၀
၄။ ဆရာတော်ဝိုင်းအတွက် ဟင်းလျှာပွဲ ………………………….. ၁၀၀၀၀
၅။ ကိတ်မျိုးစုံ ……………………………………………………… ၁၃၀၀၀
၆။ သစ်သီးမျိုးစုံ …………………………………………………….. ၇၀၀၀
၇။ အရံအလှူဖွယ်များ ……………………………………………… ၉၀၀၀
၈။ ရေခဲမုန့် ………………………………………………………….. ၈၅၀၀
၉။ ကွမ်း ဆေးလိပ် …………………………………………………. ၁၅၀၀
၁၀။ ဆရာတော်အတွက် အလှူငွေ (၅x၅၀၀၀) …………………. ၂၅၀၀၀
စုစုပေါင်း ကုန်ကျငွေ …………………………………………….. ၁၇၉၀၀
စုစုပေါင်း ရရှိငွေ ………………………………………… ၂၅၈၀၀၀
စုစုပေါင်း ကုန်ကျငွေ …………………………………….. ၁၇၉၀၀၀
စုစုပေါင်း ကျန်ရှိငွေ ………………………………………… ၇၉၀၀၀
ဤကဲ့သို့ ဘုရားရှင်၏ လမ်းညွှန်မှုအစစ်အမှန်နဲ့အတူ ပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာသူငယ်ချင်းများနေ့ ဝက်ဆိုက် အဖွဲ့ဝင်များ၏ မန္တလေးမြို့၊ မဟာလောကရန်နှိမ် အောင်တော်မူမြတ်စွာဘုရား၏ နာယကဆရာတော်၊ သြဝါဒါစရိယဆရာတော်များအား ဆွမ်းကပ်ခြင်း၊ သင်္ကန်းကပ်ခြင်း၊ ကုသိုလ်အမျှအတန်းပေးဝေခြင်းအတွက် ကုသိုလ်ယူ မုဒိတာပွားစေရန်အတွက် ရရှိငွေများ ကုန်ကျငွေများစာရင်းနှင့်အတူ ဓာတ်ပုံများကို တင်ပေးကာ အမျှဝေလိုက်ပါသည်။ ကြားသမျှ သိသမျှ မြင်သမျှ ဆွေတော်မျိုးတော်များနှင့်အတူ မကြားမသိခဲ့သော ဆွေတော်မျိုးတော်တို့အားလုံးလည်း လောကပါလနတ်မင်းကြီး၏ အသိပေးမှုနဲ့အတူ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပါစေသော်။
ဤအလှူဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ပထမဦးဆုံး စတင် ဆော်အောခဲ့သူမှာ Phyulay (ထိုင်ဝမ်) မှ ဖြစ်ပါသည်။ သူမက ဆရာတော် ဦးရာဇိန္ဒ (ရဝေနွယ်-အင်းမ) ၏ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ပိုစ့်အဖြစ်တင်ရင်း အကြံပေးလာရာက စခဲ့သည်။ အလှူဖြစ်မြောက်ရန်အတွက်ကို သူမကပင် မ,တည်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဦးစွာ အကြံပေးကာ၊ အလှူငွေ မ,တည်ခဲ့သော ဖြူလေးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ထို့နောက် အလှူငွေ ထည့်ဝင်ခဲ့သူများအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဆရာတော်ကို ပင့်လျှောက်ခဲ့ပေးသော အောင်တော်မူ ဂေါပကများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဆွမ်းကွမ်းနှင့် ကန်တော့ပွဲ ရေနွေးပွဲအတွက် လိုလေသေးမရှိအောင် လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့သော အောင်တော်မူ ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ လိုအပ်သည်များကို ဈေးသုံးပေးသော ကိုဦးနှင့် ကိုကိုမောင်ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင် ရှိပါသည်။